China 100ml ingqayi yeglasi ingqayi mveliso kunye nabenzi | Luhai
Iqhwitha eliQhelekileyo elenziwe nge-Engraving Twist-off ngeLug Lid Jam Honey Jar 1000ml 100cl 72cl Glass Jar
Uhlobo: Iibhotile zokugcina kunye neeJar
Izimbo zesikhongozeli seKhonteyina: ISWIVEL
Phawu: Luzinzile, lugciniwe
Uyilo olusebenzayo: Umsebenzi omninzi
Imiqathango Intlawulo: TT, LC, PayPal kunye Western Union
Iinkcukacha zokuPakisha: Ukupakisha kweMigangatho yokuThunyelwa kwamanye amazwe okuPhezulu okanye ukuPakisha kweCarton
Ubungakanani (Amacandelo) 1 - 6000 > 6000
1.Do ubonelela iisampulu simahla?
Ewe, sinika iisampulu zasimahla. Kufuneka uhlawule nje intlawulo yekhuriya.
2.Ungathenga ntoni kuthi?
Lonke uhlobo lwebhotile yeglasi kunye neejagi, njengeglasi yeglasi, ibhotile yebhiya. Ibhotile yeWhisky, Ibhotile yeVodka, Ibhotile yeRum, Tequila Bottle, Ibhotile yeGin, Ibhotile yeGin, iibhotile zewayini, ibhotile yeziqholo, ibhotile yezithambiso kunye neebhotile zemilo ekhethekileyo ngombala weFlint, umbala we-Flint ephezulu, umbala we-Amber, imibala eluhlaza, amandla ukusuka kwi-5ml ukuya kwi-5L.
3.Ungayenza i-OEM kunye ne-ODM?
Ewe, ngokuqinisekileyo, le yenye yeenzuzo zethu eziphambili.
4.Ungaqinisekisa njani umgangatho?
Sinezinyathelo ezi-6 zokuhlola inkqubo yeemveliso.Ukuqala kokukhanya kokukhanya kwe-LED. Okwesithathu kukuhlolwa komatshini weKhamera. I-Forth ngabasebenzi abasemgangathweni konke ukuhlolwa kweesampulu zomngxunya emgceni. Okwesihlanu kukuhlolwa kweLebhu, isithandathu sisampulu ngaphambi kokungena kwindawo yokugcina izinto, la manyathelo ama-6 okuhlola anokuqinisekisa umgangatho.
5.Ide kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho?
Ukuthetha ngokubanzi, zijikeleze iintsuku ezingama-30 emva kokufumana intlawulo.
6. kutheni le nto kufuneka uthenge kuthi hayi kwabanye abathengisi?
Amandla emveliso amakhulu aqinisekisa ukuhanjiswa kwexesha.
Ulawulo lomgangatho olungqongqo luqinisekisa umgangatho wakho.
Ixabiso elifanelekileyo liyaqinisekisa ukuphumelela kunye kunye nenqanaba eliphezulu kumgangatho ophambili wokuhambisa ngenqanawa ukuqinisekisa ukuhanjiswa kunye nenkonzo.
"Sizimisele ukugqwesa, inkampani kwiimfuno zabathengi", sinethemba lokuba lelona qela lentsebenziswano libalaseleyo, abathengisi, liyaqonda isabelo esifanelekileyo kunye nentengiso eqhubekayo yeChina Umthengisi weGolide waseChina 50ml 100ml 250ml 500ML, 750ML, 1000ML Bottle yeBhotile yeglasi yeWayini / yeNyosi nge Screw Plastic And Metal Lids, iimpahla zethu ziyaziwa ngokubanzi kwaye zithembekile ngabasebenzisi kwaye zinokwanelisa ngokuqhubekayo ukuseka iimfuno zoqoqosho nezentlalo.
Umthengisi wegolide wase China kwiijagi zeHoney Honey kunye neebhotile kunye neebhotile zewayini ngexabiso lesivalo, Ngenkxaso yezobuchwephesha, siye salungiselela iwebhusayithi yethu ukuba ibe ngamava omsebenzisi kwaye sigcine ukukhululeka kokuthenga. Siqinisekisa ukuba eyona nto ifikelela kuwe ngasemnyango wakho, ngelona xesha lifutshane kwaye ngoncedo lwamaqabane ethu asebenzayo, oko kukuthi i-DHL kunye ne-UPS. Sithembisa umgangatho, siphila ngesiqubulo sokuthembisa kuphela oko sinokukuhambisa.
Egqithileyo Intengiso eshushu Isikwere esincinci esingu-50ml 100ml Isitshizi esitshisayo seSilum Jam Iibhotile zobusi zeglasi zeJar yeJoney Jam
Okulandelayo: I-320ml ye-Stainless Steel kunye ne-Glass ye-Olive Dispenser yeViniga kunye ne-Soy Sauce Bottle yeKhitshi
Glass Honey Jar Nge Metal Cap
Glass Glass Honey Jar
Intengiso Hot Square Small 50ml 100ml Hot Chili Sauc ...
8oz 10oz iqhosha lemenyu phezulu isiciko iglasi yobusi ingqayi iglasi ja ...
Grade Ukutya ezinamacala ubusi iglasi ingqayi ingqayi jam puddi ...
Egcinwe 1oz 10oz 30ml 100ml 120ml 150ml 240ml 3 ...
I-730ml yobusi jam ijusi yokutya isosi yesosi yesikwere ...